Iziyobisi Zamanye Amazwe
Ungasifaka njani isitayile kunye neeSitayile zeLizwi kwiLizwi 2019
ILizwi 2019 libonelela ngeendlela nezitayile zokukunceda wenze umxholo wakho. Sebenzisa i isitayile -Iseti eneenkcukacha zokufomatha- yenza kube lula ukusebenzisa ukufomatha okungaguquguqukiyo kuyo yonke i- ILizwi 2019 uxwebhu. Umzekelo, unokufaka isitayile esinegama Isihloko 1 kuzo zonke izihloko kuxwebhu kunye nesitayile esinegama eliqhelekileyo kuwo wonke umbhalo womzimba oqhelekileyo. Nazi izibonelelo zale ndlela:
Lula: Ukufaka isitayile kulula kunokusebenzisa ukufomatha ngesandla. Kwaye ukutshintsha ukufomatha sisifinyezo. Ukuba ufuna izihloko zibukeke zahlukile, umzekelo, unokuguqula isitayile esiyiNtloko 1 ukuzitshintsha zonke ngaxeshanye.
Ukungqinelana: Awunakukhathazeka malunga nazo zonke izihloko ezifomathiweyo ngokungaguquguqukiyo; kuba bonke basebenzisa isimbo esinye, ngokuzenzekelayo bayafana.
Kwiintlobo ezininzi zezitayile kwiLizwi 2019, olona hlobo luqhelekileyo (ngokude) sisimbo somhlathi. Isitayile somhlathi sinokuqulatha iinkcukacha zokufomatha, ezinje ngefonti, ubungakanani befonti kunye nombala, ulungelelwaniso, ulungelelwaniso, kunye nokushiya umgca.
Ngaphandle kokuba ucacise ngenye indlela, umhlathi ngamnye wabelwe isitayile esibizwa njengesiqhelo. KwiLizwi 2019, oku kungagqibekanga kusebenzisa ifonti yeCalibri 11 (pt) kunye nokulungelelanisa isicatshulwa sakho ngasekhohlo. (I-Calibri yifonti eza neOfisi.)
Ngaba i-dextromethorphan inyusa uxinzelelo lwegazi
Amanqaku (pt) alinganisa ukuba sikhulu kangakanani isicatshulwa.
Kwiqela leZimbo kwiThebhu yasekhaya, unokufumana iisampulu zeendlela ezahlukeneyo. Le yi Izitayile zegalari . Ayizizo zonke izimbo ezikhoyo ezivela kwigalari yeZitayile; inkcazo yesimbo ngasinye ichaza ukuba ayiveli apho okanye hayi.
Ukwabela isitayile esahlukileyo kumhlathi kwiLizwi 2019, landela la manyathelo:
Cofa imouse yakho naphina kwisiqendu ofuna ukusitshintsha.
Ukuba ufuna ukusebenzisa isitayile kwimihlathi emininzi, khetha kuqala.
Cofa kwithebhu yasekhaya.
Cofa utolo olungakumbi (utolo olusezantsi kunye nomgca othe tye ngaphezulu) ngasekunene kweZitayile zegalari, uvula uluhlu olupheleleyo lweendlela zeGalari.
Izitayile ezimbalwa zegalari zeZitayile ziyabonakala ngaphandle kokucofa Okuninzi. Ukuba ufuna ukufaka isicelo, ungatsiba inyathelo lesi-3.
Cofa isitayile osifunayo.
Ezinye izitayile ziyafumaneka ngaphandle kwezo zikwiGalari yeZitayile. Ukuze uzibone, cofa ibhokisi yokubhokisi yencoko yababini kwiqela leZimbo ukuvula ipheyini yeTayile enoluhlu olukhulu. Unokukhetha nasiphi na isitayile ngokunqakraza kwisitayile kwisahlulo seZimbo.
iziphumo ebezingalindelekanga zokugonya umkhuhlane wethamo eliphezulu
Khetha ibhokisi yokubonisa yokujonga kuqala kwiifayile zestayile ukuba ufuna ukubonisa igama lesitayile ngasinye ngokufomatha isitayile esiqulathiweyo.
Ukuba ifestile yefestile iyadada (Oko kukuthi, ayixhonywanga kwicala lasekunene lesikrini), ungayimisa apho ngokuyitsalela ngasekunene ide ifike endaweni yayo. Ungayenza idadwe kwakhona ngokurhuqa ngesihloko sayo (Izitayile) ubuyele ngaphesheya kwiziko lewindows.
(x-3) ^ 2
Iinkcazo zezitayile zichongwe ngu iseti yesitayile iyasetyenziswa. Iiseti zesitayile ezahlukeneyo zinokutshintsha ngokukhawuleza ukujonga uxwebhu lonke ngokuchaza kwakhona isitayile ngasinye esakhelweyo (iifonti, ubukhulu, imibala, isithuba somgca, njalo njalo).
Ukutshintshela kwisitayile esahlukileyo esisethwe kwiLizwi 2019, landela la manyathelo:
Kwithebhu yoyilo, yalatha kwenye yeeseti zesitayile kwigalari yeeSimbo zeQela kwiqela lokuFomatha amaXwebhu.
Iseti entsha yeseti ijongelwe phambili kuxwebhu lwakho olukhoyo.
Cofa kwisitayile osifunayo.
Ukuba awuthandi naluphi na ukhetho olubonisiweyo, cofa iqhosha elingakumbi kwigalari ukuvula igalari epheleleyo yokukhetha . Qaphela ukuba unokuseta kwakhona kwisitayile esimiselweyo kwimenyu yegalari, okanye ugcine useto lwangoku njengeseti entsha.
Unokwenza kwakhona ukuguqula nayiphi na inkcazo yesitayile. Masithi ufuna isicatshulwa somzimba kuxwebhu ukuba sikhulu kancinci. Ukwenza oku, landela la manyathelo:
iziphumo ebezingalindelekanga zemontelukast
Vula ifestile yefayile ngokuchofoza ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yeqela leZitayile (kwithebhu yasekhaya).
Kwipaneli yeZitayile, yalatha kwisitayile ofuna ukusiguqula ukuze utolo olusezantsi luvele ngasekunene.
Cofa utolo olusezantsi ukuvula imenyu.
Kwibhokisi yencoko yababini eguqulwayo, yenza naluphi na utshintsho kwifomathi ngendlela oyifunayo.
Le bhokisi yencoko yababini iqulethe iintlobo ezahlukeneyo zokubhaliweyo kunye nomhlathi.
Jonga ezinye Amacebo apholileyo eLizwi 2019 .
doxycycline yesifo se-lyme kunye notywala
smz tmp ds ithebhu
Ixabiso lokuwa kwamehlo liqaqambile
Ndingayithatha ibuprofen nge mucinex
vula ukhangelo lopelo ngegama